प्राधिकरण पूर्ण स्वायत्त छ, मन्त्रालयको हस्तक्षेप छैन «
प्राधिकरण पूर्ण स्वायत्त छ, मन्त्रालयको हस्तक्षेप छैन
सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल स्थापनाकालदेखि नै प्राधिकरणमा कार्यरत छन् । राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका खनालले गोरखापत्र संस्थानमा समेत प्रशासकीय जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् । गोरखापत्रमा उनको सक्रिय र परिणाममुखी भूमिकाकै कारण उनलाई तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालयबाट दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापनाका लागि खटाइएको थियो । प्राधिकरणको कार्यालय स्थापनादेखि सिस्टम बसाउन सुरुदेखि नै सक्रिय रहेका खनाल अहिले नीति निर्माण र कार्यान्वयनको उपल्लो भूमिकामा छन् । काठमाडौंको गोठाटारमा जन्मेका खनालले व्यवस्थापनमा स्नातक र जनप्रशासन क्याम्पसबाट ग्रामीण विकास विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २१ वर्षदेखि प्राधिकरणमा कार्यरत खनालले पूर्ण अधिकारसहित निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनीसँग नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको अवस्था, समकालीन समस्या तथा चुनौतीलगायतका विषयमा सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानी ः
तपाईंलाई नेपाल सरकारले पूर्ण अधिकारसहित प्राधिकरणको निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । विगतमा विभिन्न कारणले गतिहीन र विवादास्पद बनाइएको प्राधिकरणलाई तपाईंले नेतृत्व लिइसकेपछि कसरी अगाडि बढाइरहनुभएको छ ?
मैले नेतृत्व लिँदा आर्थिक वर्ष अन्त्यको समय थियो । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्राधिकरणको आफ्नै वार्षिक कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएका ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी, अप्टिकल फाइबर, स्कुलहरूमा कम्प्युटर ल्याब स्थापनालगायत टारिफ घटाउने लगायतका काममा मैले फोकस गरिरहेको छु । उपभोक्ताका सवालमा गुणस्तरीय सेवा उनीहरूको अधिकार हो भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्ने आधार तयार गरेको छु । गुणस्तरीय सेवा नदिए उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने निर्देशिका पारित भइसके पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । सबै नागरिकले सेवा पाउनुपर्छ र सेवाको गुणस्तर पनि हुनुपर्छ भनेर प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । सँगसँगै म आएपछि यो सेक्टरमा लामो समयदेखि निर्णय नभएका विषयमा निर्णय लिने मैले जमर्को गरें ।
गुणस्तरीय सेवा नदिए उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने निर्देशिका पारित भइसके पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।
तपाईं आएपछि कस्तो निर्णय गर्नुभयो ?
नेपाल सरकारको बक्यौता तिर्दै नतिर्ने कम्पनीहरूलाई लाइसेन्ससम्म फिर्ता गर्ने भनेर निर्णय गरेको थिएँ र मलाई लाग्छ, नेपालको दूरसञ्चारको इतिहासमा यो सबैभन्दा ठूलो निर्णय पनि हो । युटिएल, स्मार्ट र नेपाल स्याटलाइटलाई असार मसान्तसम्म बक्यौता तिरेनन् भने लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेर बोर्डबाट निर्णय भएको छ । त्यो निर्णयको जानकारी गराइसकेको छु । मेरो चाहनाचाहिँ उहाँहरूले काम सुरु गर्नुहोस् र कम्पनी नमरून् भन्ने नै हो । तर, अरू कम्पनीलाई आउन नदिएर उहाँहरूले लाइसेन्स ओगटेर बस्ने कुरा त सह्य हुँदैन । फ्रिक्वेन्सी उहाँहरूलाई वितरण गरिसकिएको छ । नयाँहरू आए भने त्यो पनि उहाँहरूलाई दिनुपर्छ भने नयाँले लगानी पनि ल्याउनेछ । अहिले त ड्युओपोली छ । सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम र निजी एनसेलमात्र छ । यसले गर्दा अहिले नै पनि त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा हुनसकेको छैन र आमउपभोक्ताले अझै पनि केही बढी मूल्य तिरिरहनुपरेको देखिन्छ ।
युटिएल, स्मार्ट र नेपाल स्याटलाइटलाई असार मसान्तसम्म बक्यौता तिरेनन् भने लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेर बोर्डबाट निर्णय भएको छ ।
निजी कम्पनीहरू जसले लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेका छन्, उनीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता कति छ ?
सबै कम्पनीको कुल बक्यौता हामीले निर्णय गर्दा नै ३ अर्ब थियो र अहिले निर्णयपछिको अवधिमा पनि १ अर्ब बढेर ४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
निजी कम्पनीप्रति यसरी कठोर बनिरहनुभएको छ । सँगसँगै सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमले नवीकरणवापत बुझाउनुपर्ने २० अर्बको कुरा पनि निकै पेचिलो बनिरहेको छ । अब कसरी असुल गर्नुहुन्छ ?
हामीले लाइसेन्स पनि बोलकबोलमा जाने र फ्रिक्वेन्सी पनि बोलकबोलबाटै बिक्री गर्ने गरेका छौं र मलाई लाग्छ, दूरसञ्चारका क्षेत्रमा नेपालको यो व्यवस्था विश्वमै युनिक पनि छ । विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन नभएसम्म मोबाइल सेवाको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर २० अर्ब नै हो र त्यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन । भलै, हामीले रेभेन्यू सेयरिङमा जाऔं पनि भनेका छौं र त्यो नभएसम्म त पुरानै नीति लागू हुन्छ । महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यो तिर्नै पर्ने पैसा हो भनिसकेकाले हामीले यसमा थप निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन र यो टेलिकमले तिर्नैपर्ने पैसा हो । हामीले नेपाल टेलिकमलाई ताकेता गरेका छौं र उठाउनैपर्छ ।
विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन नभएसम्म मोबाइल सेवाको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर २० अर्ब नै हो र त्यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन ।
टेलिकमले शुल्क बुझाउनुपर्ने मिति सकिइसकेको छ । त्यसपछि पनि कम्पनीले आलटाल गर्दै आएको छ । तपाईंहरूले अब जरिवाना पनि लिनुहुन्छ कि ?
नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो भन्दैमा उसलाई छुट दिने कुरै आउँदैन । लाइसेन्स नवीकरणका लागि उसले तीन महिना पहिल्यै निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार प्रक्रियामा गइसकेकाले नवीकरणको प्रक्रियामा गइसकेको छ र यसअघिजस्तो नवीकरणका लागि यति छुट दिने भन्ने सरकारको निर्णयसमेत नभएकाले पूरै दस्तुर तिर्नुपर्छ नै । यसमा हामी एक साताभित्रै निर्णय पनि गर्नेछौं । अब रह्यो, २० अर्बको कुरा, त्यो भने महालेखाले समेत बेरुजु देखाइसकेकाले अब हामीले निर्णय गर्न सक्ने कुरा पनि होइन र टेलिकमले जसरी पनि तिर्नैपर्छ ।
प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरणदेखि हरेक कुरामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन पर्खन्छ भन्ने सुनिन्छ । यसरी हेर्दा प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकाय मान्न सकिन्छ अथवा मन्त्रालयकै कुनै महाशाखा ?
कसरी तपाईंले यो प्रश्न गर्नुभयो ? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पूर्णतः स्वायत्त निकाय हो र यसको कामकारबाही तथा निर्णयमा सरकारले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । तर, हामी नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि सल्लाहकार पनि हौं र सरकारको नीतिअनुसार यस क्षेत्रका नीति कार्यान्वयन गर्नु गराउनुचाहिँ दफा २० अनुसार हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ । एनटीएले निर्देशन मागेर पठाउँछ भन्ने चाहिँ गलत हो, तर सरसल्लाह त भइहाल्छ ।
सञ्चार मन्त्रालयको सचिव नै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम)को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । तपाईंहरूको पनि तालुक मन्त्रालय त्यही हो भने नियमनमा कन्फ्लिक्ट अप्m इन्ट्रेस्ट नहोला भन्न सकिएला र ?
म तपाईंलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने प्राधिकरण पूर्णतः स्वायत्त निकाय हो र यो सञ्चार मन्त्रालयको शाखा होइन । सञ्चार मन्त्रालय त हामीले नेपाल सरकारमा सम्पर्क गर्ने सम्पर्क मन्त्रालयमात्र हो । हाम्रो बोर्डमा पनि कोही सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहँदैनन् । सबै सञ्चालक स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । जहाँसम्म ९२ प्रतिशत सरकारकै सेयर रहेको कम्पनीको अध्यक्षका रूपमा सचिवज्यू हुनुहुन्छ, यसमा उहाँको दोहोरो भूमिका हुन्छ । टेलिकमको अध्यक्षको कुर्सीमा बस्दा उहाँले सञ्चार सचिव हुँ भन्ने कुरा बिर्सनुपर्छ र मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेर निर्णय गर्दा टेलिकममा म अध्यक्ष छु भन्ने ढंगले व्यवहार गर्नु पनि हुँदैन । यो भूमिका उहाँले राम्रैसँग निर्वाह गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ । हामीमाथि उहाँको कुनै दबाब छैन । अहिले नै टेलिकमले २० अर्ब तिर्न मानिरहेको छैन, कर्मचारीले दबाब दिइरहेका छन् भन्नेजस्ता समाचारहरू बाहिर आइरहे पनि सचिवज्यूले हामीलाई कहीँ पनि दबाब दिनुभएको छैन र हामीले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गरिरहेका छौं ।
अहिले नै टेलिकमले २० अर्ब तिर्न मानिरहेको छैन, कर्मचारीले दबाब दिइरहेका छन् भन्नेजस्ता समाचारहरू बाहिर आइरहे पनि सचिवज्यूले हामीलाई कहीँ पनि दबाब दिनुभएको छैन र हामीले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गरिरहेका छौं ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको दोस्रो ठूलो कम्पनी एनसेल लामो समयदेखि कर विवादमा छ । यो तपाईंहरूको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भए पनि यसको सेवा बहिस्कारजस्तो नकारात्मक अभियान चलिरहेको बेला प्राधिकरण मौन बस्नु कत्तिको उचित हो ?
पक्कै पनि एनसेलको कर विवाद हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । क्यापिटल गेन ट्याक्स ठूला करदाता कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने हो र सुरुदेखि नै भ्याट, कर्पोरेट ट्याक्सलगायतका विषयमा एनटीएसम्म सोध्न पनि आउनु नपर्ने र उहाँहरूले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्ने भएकाले हाम्रो संलग्नता नै रहँदैन । यद्यपि, सेवा बहिस्कारको कुरा गलत हो, जुन गर्नु हँदैन । सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो । कतिपय टेलिकम नपुगेको ठाउँमा एनसेल पुगेको छ । त्यसले गर्दा नै दूरसञ्चार क्षेत्र यहाँसम्म आइपुगेको हो । यस्तै, निजी क्षेत्र आएर नै विदेशी पुँजी र प्रविधि नेपाल भित्रिएको छ । अरू अपरेटरहरूले सिक्ने मौका पनि पाएको छ । डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा एनसेलको भूमिका महत्वपूर्ण छ । करको कुरा पनि सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेकाले हामीले बोल्नुपर्ने कारण छैन । तर, मैले संस्थागत रूपमा नभई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा जसरी पनि यो विषय टुंगिनुपर्छ, आर्बिटेसनमा जानुभन्दा सहमतिमै टुंगिए राम्रो हो । प्रक्रिया जति लम्ब्याउँदै गयो उति समस्या आउन सक्छन् । अर्कातर्फ एनसेल विदेशी लगानीको कम्पनी भए पनि मूलतः नेपाली कम्पनी हो । वार्षिक २० देखि ३० अर्ब राजस्व बुझाइरहेको पनि छ । रोजगारी सिर्जना गरेको छ र आज नेपालमा मोबाइलमा १ रुपैयाँमा कुरा हुनसकेको छ । ५ रुपैयाँमै डाटा प्याक पाइरहेको अवस्था छ । एउटामात्र कम्पनी भएको भए यो अवस्था आउने थिएन । हामीले गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्छ भन्न सक्छौं तर अमुक कम्पनीको सेवा नलिऔं भनेर आन्दोलन गर्नु गलत हो । भोलि बिजुली आएन भने सेवा बहिस्कार गर्ने, पर्सी बसको सेवा बहिस्कार गर्नेजस्ता कामले हामीलाई नै घाटा हुने हो ।
सेवामा विविधता दिने भनेर विगतदेखि नै भनिँदै आएको हो । तर, अहिले पनि दुईवटा कम्पनीमात्र बजारमा सेवा प्रवाहमा छन् । तेस्रो, अपरेटर ल्याउन चाहिँ किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
फ्रिक्वेन्सी लिएर बसेका सेवा प्रदायकले सेवा सुरु गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । एनटीएले नसोचेको अथवा त्यही स्पिरिटअनुसार निर्णय नगरेको पनि होइन । दुर्गममा सेवा दिइरहेकालाई मेनस्ट्रिममा आऊ भनेर युनिफाइड लाइसेन्स दिइएको पनि हो । सोहीअनुसार युटिएल र स्मार्टले युनिफाइड लाइसेन्स लिएका पनि हुन् । स्मार्टले त केही हदसम्म सेवा सुरु गरिसकेको पनि छ । युटिएलको त कम्पनी शून्य ग्राहकजस्तै अवस्थामा छ । असारसम्म बक्यौता चुक्ता गरेर मात्र पनि पुग्दैन कि सेवा सुरु गर्नुपर्ने आधार पनि हुुनुपरयो ।
तर, लगानी सम्मेलनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्ससम्म सञ्चारमन्त्रीलाई नै साक्षी राखेर विदेशी लगानी ल्याउने सम्झौता गरेको सिजी टेलिकमलाई भने लाइसेन्स नै दिइरहनुभएको छैन ?
लाइसेन्सका लागि पनि निश्चित शर्त र प्रक्रिया त पूरा गर्नुपर्छ । आज चौधरीजी आउनुभयो, भोलि गोल्छाजी आउनुहोला; तर सिधै लाइसेन्स दिइहाल्न मिल्दैन । हामीले उहाँहरूको निवेदनपछि प्रक्रिया अगाडि बढाएका पनि हौं । पहिला उहाँहरूको पनि बक्यौताको समस्या थियो, त्यो समाधान भएको छ । उहाँलाई लाइसेन्स दिन २०६९ सालको राजपत्रमा प्रकाशित केही सूचनाले रोकेको थियो । त्यो सर्त पूरा गरेरै युटिएल र स्मार्टले लाइसेन्स पाएका हुन् । तर, त्यो सर्तलाई नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले परिवर्तन गरेको पाइयो । पूर्वाञ्चलको ५ सय ३४ गाविसमा सेवा पु¥याउनका लागि तत्कालीन एसटिएमलाई लाइसेन्स दिएको थियो । सो क्षेत्रमा बिटिएस वा एक्सचेन्ज स्थापना गरेरमात्रै युनिफाइड लाइसेन्सका लागि आउनसक्ने प्रावधान थियो । तर, २०७२ सालतिर आएर मन्त्रिपरिषद्ले त्यो प्रावधान परिवर्तन गरेर अनुमतिपत्र पाइसकेपछि त्यो स्थापना गरे पनि हुन्छ भनेर निर्णय भएको रहेछ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको निर्णय प्राधिकरणले नमान्ने कुरा भएन । त्यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट मन्त्रालय हुँदै यहाँ आएको रहेछ । मैले के देखेँ भने त्यो निर्णयले २०६९ सालको राजपत्रको सूचनालाई संशोधन गरेको हो । राजपत्रको सूचनाको संशोधन निर्णयमा भए पनि फेरि राजपत्रमा निस्केको रहेनछ । यही निर्णय भोलि नेपाल स्याटेलाइटलाई पनि लागू हुनेछ, तर उसले चाहिँ थाहा नपाउने त ? कोठाभित्र बसेर निर्णय हुनु भएन भनेर फेरि राजपत्रमा यो सूचना प्रकाशनका लागि हामीले नेपाल सरकारमा लेखेर पठाएका छौं, राजपत्रमा प्रकाशनमा हुनुपर्ने हो कि होइन भनेर । सरकारले त्यो संशोधन नगरी सिजीले पूर्वाञ्चलमा बिटिएस बनाएर आएको भए हामीले सरकारलाई सोध्नु पर्दैनथ्यो, हामी स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने थियौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएर यो अवस्था आएको हो, सिजीलाई लाइसेन्स नदिने हाम्रो मनसाय होइन ।
प्रसंग बदलौं, पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणले पोलको भाडा वृद्धि गर्दा आईएसपीहरू आन्दोलित छन् । भोलि यसको भार उपभोक्तालाई नै पर्ने हो भने एनटीएले यसमा केही तदारुकता देखाउनुपर्ने होइन र ?
विद्युत् प्राधिकरण वा दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको नीतिलाई सहयोग पु¥याउने गरी गर्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भन्दै पनि आएको छु । नेपाल सरकारको नीति र लक्ष्यविरुद्ध जाने गरी विद्युत् प्राधिकरणले वा दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै पनि निर्णय गर्नुहुँदैन । कृषिसम्बन्धी सरकारी नीतिमा सहयोग पुग्छ भने मैले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बसेर आफ्नो फाइदामात्र हेरेर निर्णय गर्नु हुँदैन । स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीतिलगायतका विषयमा ई–हेल्थ, ई–एजुकेसनमा हामीले सहयोग गर्ने हो । मूलतः सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलगायतलाई सहयोग पुग्ने गरी हामी सबैले निर्णय गर्नुपर्छ । ब्रोडब्यान्डको लक्ष्य नै प्रभावित हुने गरी सरकारका कुनै पनि निकायले भाडा बढाउनु हुँदैन । भाडा बढाउँदा पनि अव्यावहारिक रूपमा बढाएको पाइयो भने अर्कातर्फ उहाँहरूको विज्ञप्ति हेर्दा आईएसपीहरूको खर्बौंको व्यापार छ भन्ने आरोप लगाइएको छ । आईएसपीहरूको कारोबार जम्मा ८–१० अर्बमात्रै हो । यस्तै, वार्ताको टेबुलबाटै पनि यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्थ्यो । विद्युत् प्राधिकरणलाई के समस्या परेको हो, हामी मध्यस्थता गर्न सक्थ्यौं । सरकारको पोलिसी लागू गर्नुपर्ने दायित्व हामी सबैको हो । प्राधिकरणको नेतृत्वबाट वार्ता भएकाले सहमतिमै टुंगिएला भनेर आशा गरौं ।
स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीतिलगायतका विषयमा ई–हेल्थ, ई–एजुकेसनमा हामीले सहयोग गर्ने हो । मूलतः सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलगायतलाई सहयोग पुग्ने गरी हामी सबैले निर्णय गर्नुपर्छ ।
पूर्वाधार नीति कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन नि ?
हामीले यसको आधारभूत पक्ष पूरा गरेका छांै । यसका लागि कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ र उसलाई लाइसेन्स पनि दिनुपर्छ । सम्भवतः यो व्यवस्था चाँडै नै लागू हुनेछ । यसको सुरुवात ठूलो कम्पनी भएकाले नेपाल टेलिकमबाटै हुनुपर्छ । हामीले कार्यविधि तयार गरिसकेका छौं । भोलिका दिनमा सबै कम्पनीका लागि ड्युअल इन्भेस्टमेन्ट नहुने भएकाले सबैलाई फाइदा पुग्छ । हामीले तारहरू व्यवस्थित गर्न पनि कम्पनी छनोट गरिसकेका छौं ।
प्राधिकरण स्वायत्त छ